Basa rekabhinzi pamunhukadzi | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Basa rekabhinzi pamunhukadzi
Basa rekabhinzi pamunhukadzi
Kabhinzi kemukadzi hakana rimwe basa rinozikanwa pane zvakanoita kunze kwekuti kanounza kunakirwa kwemukadzi pakusvirana nemurume uye pakuzvibatabata ari ega muridzi kana afunga kuzvibvisa zemo.
Pane zvitsinga pakabhinzi zvinova izvo zvinokonzera kuti unakirwe pakukwiziwa pamberi pese. Zvinoreva kuti kana mukadzi akabatwa zvakanaka nemurume akachenjera, anonakirwa chose kupfuura kunakirwa kunoita murume wacho.
Tinoonazve kuti bhinzi zveshuwa haina rimwe basa. Mboro yemurume ine mabasa rakawanda, kunoti kana achida kuita weti, anoita nemboro yake. Kana achida kupa mukadzi hurume anomupa nemboro. Zvino bhinzi yemukadzi yakangozvimiririra iyo chete pabasa iroro rimwe chete rekunakirwa kwemuridzi wayo chete chete.
Saka mubvunzo ndewekuti: Zvinobhowa zvakadii kuva nemurume asingatombozivi kuti bhinzi yacho iri papi chaipo uye asina kana kumboiwona kana kuva nehanya nayo kana kuikwazisa kana kutamba nayo? ” Kana waita murume akadai, wana mukana wekumurondedzera nyaya yebhinzi nekumuratidza zvairi. Muratidze imire uye isina kumira anzwisise kuti maitiro ayo akangofanana neemboro yake. Pakuzonakirwa chero ukamurondedzera sei haanzwisisi nekuti bhinzi inonaka kumukadzi kupfuura kunaka kunoita mboro kumurume.
Iwe mukadzi jaira kuti murume aone kuti kana maoko ako ari pabhinzi yako uri kunakirwa zvakadii. Zviya kana wakarara manhede murume achikoira ari pamusoro, isa maoko pakati penyu uzvikwizirira kabhinzi unzwe pane moyo uku murume achiwedzerawo. Murume ngaanzwisise kuti pasina kushamwaridzana nebhinzi yako kunakirwa kwako kushoma. Ukasadzidzsa murume nezvebhinzi zvoreva kuti iwe muridzi ndiwe hako uchazvionera pakunakirwa nayo.
Mukadzi anozvarwa ane kabhinzi nechekare asi paanotanga kumera mazamu, bhinzi inotangawo kukura, uye ichigaromira chero akarara hope sezvinoitawo mboro yemurume. Kusiyana kwacho ndekwekuti mboro yemurume inotanga kumiri mwana achiri mudumbu asati azvarwa. Bhinzi inonzi inozotanga musikana ati kurei. Vamwe vanotanga kumakore manomwe kuziva kuti kubata nekupuruzira bhinzi kunonaka. Vamwewo vanozoziva vati kurei mazamu omira.
Ukaona kukura kwebhinzi yemukadzi imire sekuti zviya ane zemo. Ndosaka mukadzi achiti kana achiita 0rgasm pase apa panonzwikwa kunaka kwapo. Kotizve kana mboro ichipinda nekubuda mubeche kuzasi kwebhinzi, unonyatsinzwa kunaka nekuti inenge ichikwizirira mudzi webhinzi.
Kune vakadzi vasingakwanisi kubatwa kabhinzi nekuti vanonyanyonakirwa, vamwe vevakadzi vakadai vanhu vanokasira kutunda pakusvirwa then vaye vanongoti kungonzi musoro wemboro shweee okoirwa kwenguva yakaita kana maminitsi matatu otoridza mhere nekutunda futi ipapo, murume akaramba achimukoira otunda futi, zvichienda zvakadaro.
Kune vakadzizve vakawanda vanonakirwa nekukwiziwa bhinzi chero vava chembere, sezvinongoitawo varume vanoda chose kusvira vava vanhu vakuru. Unoona munhu achiiroora mukadzi ane makore 30 iye ane makore 75, asi mukadzi wake achizozvara vana kureva kuti ari kusvirwa nguva nenguva. Chinoregesa vakadzi vakawanda kuramba vachisvirwa vakura kunonoka kunyorova mubeche. Asi kana akangokwiziwa bhinzi anongoitawo 0rgasm sezvaaita achiri mudiki.
Pamberi pevakadzi vakawanda panovavirira zvekuda kukwenyewa nguva nenguva. Chinhu chakanaka kumbotorawo nguva uchikwenya mukadzi wako pamberi pake pese kubva kuno kumusoro kudzika nepabhinzi nepamatinji kusvika pasi pebeche. Ukajaira kukurudzira murume wako kukukwenya zvinyoronyoro pese apa, sokuti muchiona TV kana kuti muchiita nyaya vana varraa, uchaona kuti anopedzesira ava kungoda kupinza ruoko mubhurugwa mako kana muri mega. Murume ngaajaidzwe kufunga kuti zvinonaka. Kana ava kukwenya iwewo chisudurutsa makumbo umupe mukana. Muudze kuti bhinzi yamira nokuti mutauro waanonzwisisa.Kana akwenya mupewo reward yakaita sekumukisa kune chido chaicho, kana kumuisawo ruoko mubhurugwa make womupuruzira mboro. Chinhu chakanaka kunzwa mboro ichimira muruoko rwako.
Garoratidza murume bhinzi kana yakamira nokuti kune varume vanotya bhinzi, zvikuri kana iri hombe. Vanofunga kuti inokuvadza chimwe chinhu. Kana wako achitya, mutaudze pazviri ahwisise kuti bhinzi kanongori kachombo kadiki kasina dambudziko. Kana mambogeza anokwanisa kukisa bhinzi yako chinova chinhu chinonaka kupfuura kupinzwa chombo.
PbBhinzi ndipo panobva kunakirwa kwemukadzi panyaya dzese dzekusvirana mumba menyu. Bhinzi zvese nenyama dzakaipoteredza zvinozvimbirira kana zemo rawanda. Bhinzi yomira sezvinongoitawo mboro. Kana zemo rapera kuzvimba kuya kunopera. Asi chinoitika kuvakadzi kazhinji ndechokuti kusvirwa nemurume hakupedzi zemo, nekuti murume anokasirisa kudiridzira mukadzi. Murume adaro mboro inobva yarara, mukadzi achine zemo. Zvadaro vakadzi vakawandisa mudzimba umu vanoita nguva yakareba zemo riya riripo. Zvino kana achida kurara, hope dzonetsa kuuya. Kazhinji anozoti murume abatwa nehope iye ozvibatabata kusvika aguta, zemo rapera orarawo hope. Ndosaka tichiti varume dzidzai kuita nguva uchikoira mukadzi wako kusvika atanga iye kuguta iwe wozodiridzira hako mese moita hope dzakanaka.
Previous articleMusviri mukuru young Kells arikuchemedza mukadzi wemunhu nemboro
Next articleNdakamupidigura ndikadhonza magaro ndokupomba beche kusvikira ndatundira mukati!